Eyona ndidi yeCalcium 2-oxoglutarate yoMvelisi-eCofttek
ICofttek yeyona mveliso iphambili yeCalcium 2-oxoglutarate yomgubo eTshayina. Umzi-mveliso wethu unenkqubo epheleleyo yolawulo lwemveliso (i-ISO9001 kunye ne-ISO14001), kunye nemveliso yenyanga nenyanga ye-500kg.
I-calcium 2-oxoglutarate (71686-01-6) Suqobo
igama: I-calcium 2-oxoglutarate
Ifomula yeMolekyuli: C5H4O5CA
Ubunzima Ezinto: 184.16 g / mol
Iintetho: calcium 2-oxidanylidenepentanedioate;
2-oxo-glutaric acid, ityuwa yekhalsiyam;
Umzimba: I-Soluble etywaleni, i-DMSO, kunye ne-methanol
Umbandela woGcino: 2-8 ° C
isicelo: Apha sibonisa ukuba i-alpha-ketoglutarate (ihanjiswa ngohlobo lweCalcium ityuwa, iCaAKG), isetabolite ephambili kumjikelezo we-tricarboxylic (TCA) ekuxelwe ukuba yandisa ixesha lokuphila kwiintshulube, inokwandisa kakhulu ixesha lokuphila kunye ne-healthspan kwiimpuku.
Kubonakala: Mhlophe ekukhanyeni umgubo omhlophe